Otú ihe Spotify eri
2 Spotify Wijetị
4 Spotify ndekọ
5 Play na Spotify
7 Alternative maka Spotify
Ka ọ bụla ọzọ nnweta ma ọ bụ online ọrụ Spotify na-eme ka n'aka na ebubo na-ebubo dị ka kwa mkpa na ina nke onye ọrụ na onye dị ka ngwugwu na họpụtara na nke a. A nkuzi e dere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results ozugbo ha ga-aga site na nke a nkuzi ka e dere ya ịkụziri ndị ọrụ dị ka ebubo na echiche na ụlọ ọrụ na-eji nile ụwa na-eme ka n'aka na revenue a na-ahụ site na mgbe nile.
Part 1: Olee otú Spotify eri
Nkebi nke 2: Òtù atụmatụ nke Spotify
E nwere dị iche nchịkọta na dị maka ọrụ na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na otu nke kasị mma na-ahọrọ dị ka kwa mkpa na ọchịchọ nke onye. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị nchịkọta nke Spotify na mmekọrita ha na-adịbeghị anya mgbasa na ọkaibe ọrụ na e hiwere ulo oru na-pacify ọrụ. Ọ na-na--ahụ kwuru na nkwado ego na-nyere site na ụlọ ọrụ ya ọrụ ma e nwere NO ego nchịkọta nke ụlọ ọrụ na ihe niile nchịkọta na-ebubo na nkịtị. Otu nwekwara e kwuru okwu ya ná ukara website nke ụlọ ọrụ ebe ọ pụrụ anya n'okpuru isiokwu nke ịnye ọnụahịa na atụmatụ.
1. Trial ngwugwu
2. Adịchaghị ngwugwu
3. Mmụta ngwugwu
4. Family ngwugwu
5. Na-eri na mba dị iche iche
E wezụga ndị a na e nweghị ọzọ nchịkọta na-chụọrọ onye ọrụ na onye ọ bụkwa na-ahụ kwuru na iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ọmụma nke ikpeazụ akụkụ nke a nkuzi ẹyụhọde na ọmụma nke metụtara ụlọ ọrụ na-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
The nchịkọta ga-atụle n'isiokwu na-zuru ezu iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi ọmụma dị ka kwa uche na ọchịchọ na ọ bụrụ na Spotify akaụntụ bụ na-ahọpụta ka mgbe ahụ, ọ bụ ndị mbụ na ikpeazụ resotu nke onye ọrụ ebe niile ozi e weere iji jide n'aka na onye ọrụ na-abụghị nanị pacified kamakwa ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ọrụ. Mgbe edebanye maka Spotify onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ojiji kwa ọnwa na-atụle na onye ọrụ ọkọkpọhi ụzọ kasị mma na-eme ka n'aka na ojiji anyị zutere na nla ọgwụgwụ na ọ dịghị data ọnwụ etịbe. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na ezinụlọ atụmatụ a nanị zụrụ ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ nke songs ndị a ga-ege ntị dị elu. The nkuzi ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ọmụma banyere na-eri nke mmemme na-a na-awa cross ókè-ala nke mere na akpan akpan bi na mba nwere ike na-na-erite uru site a nkuzi.
Ọ bụ nnọọ n'efu ma onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na kaadị ma ọ bụ ugwo usoro na-aha mere na n'ọdịnihu mgbe na ndenye aha a ga-ọhụrụ ọ pụrụ deducted si ịkwụ usoro na kemgbe ntọlite ​​na ọ bụrụ na ọrụ adịghị chọrọ ọrụ sirila mgbe ahụ, ọ nwere ike ime ka n'aka na ikpe ngwugwu kwụsị ozugbo ụbọchị nke ọhụrụ na-eru nso. Ọ ga-ekwe ka onye ọrụ na nke kacha mma na ọrụ na ga-ekwe ka ya ịzọpụta-eri. Ọ bụ free ụbọchị 30:
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị eji na ọtụtụ ebe ghọtara atụmatụ nke Spotify. Ọ na-eme n'aka na otu onye ọrụ bụ na afọ ojuju na-enweghị ihe ọ bụla hassle na-arị elu na-eri. Ọ na-emekwa n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na-ụtọ site a onye ọrụ na nke a iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma. Iji mee ka ndị kasị mma ojiji nke atụmatụ ọ na-gwara ịzụta ya dị ka kwa mkpa na ina na e nwere ike ime na otu atụmatụ nwere ike ije ozi mkpa nke abụọ na ala.
3. Mmụta atụmatụ
E nwere ego nke 50% n'elu adịchaghị atụmatụ iji jide n'aka na a na-amụrụ atụmatụ a mere. Ọ na-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe atụmatụ ọ na-eri. Otú ọ dị iji na-atụmatụ a ọ na-gwara iji jide n'aka na ihe àmà nke ịbụ nwa akwụkwọ na-emailed na ụlọ ọrụ na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na-enweghị ihe a na-egosi na ọ bụghị ga-esi nweta na-amụrụ otu dị ka e nwere nweghị ụzọ ọzọ na nke a:
4. Family atụmatụ
Atụmatụ a e mepụtara iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na-nyere ndị ezinụlọ ndị hụrụ n'anya na-anụ music kpam kpam. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma atụmatụ na maka otu ihe ahụ ọ na-eme ka n'aka na mkpa nke obere ezinụlọ na-pacified na nke kacha mma o kwere omume n'ụzọ. The n'ozuzu ndenye aha ebubo na na-metụtara ezinụlọ a atụmatụ bụ zilch mgbe ọ na-abịa na nke atụmatụ na e agbakwunyere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ihe mere a mmachi atụmatụ nke awade na ọtụtụ:
5. Spotify ahịa na mba dị iche iche
Ọ bụkwa otu n'ime echiche nke ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a. Ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na ndenye aha ọrụ na-achọgharị online n'ihi na ha mba na-juputara na-enyocha nke mere na e-anọgide dịghị ihe ọ bụla nke na-ejighị n'aka. The n'ozuzu elekwasị anya nke Spotify bụ ime ka n'aka na ezinụlọ atụmatụ na-akwalite dị ukwuu dị ka o kwere omume ka ha ga-eduga egwu na elu revenue n'ọgbọ. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ebe ọ bụ na November 2014 na-akparaghị ókè atụmatụ e chịrị si. N'okpuru bụ ụfọdụ ahịa nke ezinụlọ atụmatụ ke ama mba nke ụwa. The isi iyi bụ http://www.cnet.com/news/spotify-rolls-out-family-feature-separate-accounts-one-bill/
Spotify Family atụmatụ
Family 2 (otu mmezi akaụntụ)
Family 3 (abụọ mmezi akaụntụ)
Family 4 (atọ mmezi akaụntụ)
Family 5 (anọ mmezi akaụntụ)
Isi Iyi: http://www.dummies.com/how-to/content/comparison-of-spotify-subscriptions.html
Free $4.99, £ 4,99, ma ọ bụ € 4,99 kwa ọnwa $9.99, £ 9,99, ma ọ bụ € 9,99 kwa ọnwa
Play na hazie gị onwe gị MP3s
Play Obodo faịlụ gị cellphone
Were gị music ná mba ọzọ
-Anọghị n'ịntanetị mode na gị cellphone
Enwekwukwa ụda àgwà
> Resource> Spotify> Olee otú Ọtụtụ Spotify efu